ဘောလုံးကို Valve, ကမ္ဘာလုံး Valve, Valve Check, ဂိတ် Valve - JKG Valve
အနားကွပ် Ball ကို Valve
ANSI / ASME ဂိတ် Valve
ANSI / ASME ကမ္ဘာလုံး Valve
manfacturer သကဲ့သို့ငါတို့သည် OEM, လိမ္မော်ရောင်နဲ့ R & Dsolution ထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပေးပို့သည့်ရက်စွဲကိုအလွန်တိုတောင်းသောအောင်သော producting အတူ။
3 ပိုငျးပိုငျးသံမဏိ Pneumatic Actuated Bal ...
သာမန်ဖိအားအနားကွပ် Ball ကို Valve လီဗာကိုငျတှယျ ...
class 150LB CF8 သံမဏိအနားကွပ် Ball ကို Va ...
GB ကို / ANSI CF3 လူပျိုတံခါးခတ်န့်ကို Valve Check ...
နွေန့်ကို dual ပြား Swing Valve Check ...
Rotary Actuator န့်ကိုလိပ်ပြာထိန်းချုပ်ရေး Valve က S ...
အပြည့်အဝကိုဘှားမွငျအက်စ်အက်စ်3Way ကိုအနားကွပ် Ball ကို Valve ကို T / L ကိုဖိုး ...
အမြင့် Temp စက်မှုအဆင့်4လက်မအနားကွပ်ဂိတ် ...
H41 အနားကွပ် Connection ကိုဒေါင်လိုက်မာဖလာ Va Check ...
JKG Valve နည်းပညာ Co. , Ltd ကျနော်တို့အသီးအနှံအဆို့ရှင်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ 2004 ခုနှစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ သုံး. သည်နှင့် ISO 9001 standards.The ကုမ္ပဏီစုံလင်သောအရည်အသွေးကိုအာမခံချက်စနစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး abroad.it ထံမှအဆင့်မြင့်အဆို့ရှင်အလိုအလျှောက်စမ်းသပ်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်အတူထုတ်ကုန်တင်းကျပ်သောအညီဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းဓာတုဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှိပါတယ်, စက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်, ultrasonic နှင့် cloth.Series ထိုကဲ့သို့သော Brinell ခိုင်မာသောစမ်းသပ်မှု, ultrasonic နံရံအထူစမ်းသပ်မှု, ultrasonic အားနည်းချက်ထောက်လှမ်း, သံလိုက်အမှုန်စစ်ဆေးခြင်း, X-ray inspection.metallographic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အဆို့ရှင်ဘဝစမ်းသပ်မှုများနှင့် ultra-high ဖိအားအဆို့ရှင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်အဖြစ်စမ်းသပ်စွမ်းရည်; ပေး အစွမ်းထက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအာမခံ။
အသေးစားအပြည့်အဝဆိပ်ကမ်း3Way ကိုအနားကွပ် Ball ကို Valve Square ကို ...
H71 ကာဗွန်သံမဏိန့်ကိုအမျိုးအစားမဟုတ်သောပြန်သွား Valve လီ ...
ဒေါင်လိုက်တိတ်ဆိတ်အမျိုးအစား Valve နွေတင်ခဲ့သည် Check ...
150LB ပန်ကိတ်န့်ကို Pneumatic ထိန်းချုပ်ရေး Butterfly က ...
အနားကွပ်စက်မှု Pneumatic Actuated Ball ကို Valve ...
2 Way ကိုအနားကွပ်အင်္ကျီလက် Plug Valve ဖျတံဆိပျ ...
ကိုယ်ပိုင်ချောဆီကိုအနားကွပ်ရပ်ကွက် Ptfe Plug ဖွင့် ...
API ကို 6d PTFE2လက်မအင်္ကျီလက် Plug ထိန်းချုပ်ရေး Valve အို ...
လိပ်ပြာ Valve ထိုအ Precautio ၏အခန်းကဏ္ဍကို ...
အဆိုပါလိပ်ပြာအဆို့ရှင်လည်းခတ်အဆို့ရှင် 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့စညျးမဉျြးဥပဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနိမ့်ဖိအားပိုက်လိုင်းမီဒီယာ၏ switch ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆို့ရှင်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ဟာကိုရည်ညွှန်းသည် ...
ချေး မှစ. Valve ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘယ်လို
အဆို့ရှင်များ၏ချေးများသောအားဖြင့်ဓာတုသို့မဟုတ်လြှပျစစျပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာအဆို့ရှင်သတ္တုပစ္စည်းများများ၏ပျက်စီးမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ချေးသတ္တုနှင့်ကြိမ်မြောက်အကြားအလိုအလျောက်အပြန်အလှန်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်အဖြစ် ...
လိပ်ပြာ Valve အဖြစ်များသည့်ပြတ်ရွေ့
စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ရော်ဘာ elastomer, ဝတ်ဆင်, ဖြတ်, ဇရာ, ဖောက်ထားနှင့်ပင်သွန်းဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိရလိမ့်မည်။ အစဉ်အလာအပူတင်နိုင်လုပ်ငန်းစဉ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ခက်ခဲသည် ...
ဘောလုံးကို Valve တပ်ဆင်ခြင်းအမှတ်
ရှေ့နှင့်နောက်ပိုက် 1. installation ကိုမရောက်မီဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်ပြင်ဆင်မှု coaxial ဖြစ်သင့်, ထိုသူနှစ်ယောက်အနားကွပ်၏တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်များအပြိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါပိုက်ကြှနျုပျတို့ကိုဆီးတားနိုင်ဖြစ်သင့် ...